टिप्स Archives – healthykhabar.com
कोरोना अनुभवः पहाडले शरीर थिचेझैं हुन्थ्यो
काडमाडौं,४ कात्तिक । असोज १२ गते मंगलबार जिउ अत्यधिक दुख्यो । राती एक्कासी ज्वरो आयो फेरि भोलिपल्ट बुधबार जिउ असजिलो भइरहेको थियो । यस समयमा प्रत्यक बर्ष एस्तै हुन्थ्यो । त्यही होला भन्ने सोँचे । अरु कुराको शंका नै भएन । राती पुनः ज्वरो आयो । बिहिवार कोरोना परिक्षण गराए । त्यसपछि रिपोर्ट आउनै ४ दिनको अद्भुत पर्खाइ पर्खिरहे । आइतबार बिहान उठेर सदा झैँ नित्यकर्म सकेर खाना खान के सुरु गरेथे फोनको घण्टि बजिहाल्यो । फोन रिसिभ गरे । उताबाट आवाज आयो,“तपाईंलाई कोरोना पोजेटिभ आएको छ, सुरक्षित रहदै स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोला ।” कोरोना भाइरसको कारण पहिलो पटक घोषणा भएको बन्दाबन्दीकै समय देखि अत्यन्तै सावाधानी अपनाउदै सामाजिक गतिबिधीमा सकृय बनियो । बन्दाबन्दीको कारण चुल्हो नबल्ने धेरै गाउँ तथा जिल्लावासी लगायतहरुलाई काठमाडौंका कोठा दैलो सम्म पुगेर राहत उपलब्ध गराईयो । पटक पटक परिक्षण गराउदा नेगेटिभ आएकोमा आफ्नो नियमित दैनिकी गुजार्दा गुजार्दै अप्रत्याशित रुपमा एक्कासी यस्तो समाचार आउँदा मन अलिकती अमिलो हुने…
काठमाडौं, २९ असोज । आज विश्व हात धुने दिवस नेपालमा पनि विविध कार्यक्रमका साथ मनाइँदै छ । हरेक वर्ष अक्टोबर १५ का दिन विश्व हात धुने दिवस मनाउने गरिन्छ । त्यसैले पनि यो वर्ष हात धुने दिवसको महत्व अझ बढी देखिएको छ । कोरोना संक्रमणबाट बच्न अपनाइने तीन वटा मूल मन्त्र २ मिटरको भौतिक दूरी, मास्कको उचित प्रयोग र साबुन पानीले हात धुने रहेको छ। त्यो मध्ये साबुन पानीले नियमित २० सेकेण्डसम्म हात धुने गरेमा कोरोनाबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। नेपालमा सन् २००८ अक्टोबर १५ देखि विश्व हात धुने दिवस मनाइँदै आएको छ । यस वर्ष ‘हातको सरसफाइ सबैका लागि, साबुनपानी हात, सधैं साथसाथ’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाइँदैछ ।यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज शुभकामना सन्देश दिँदै ‘कोभिड–१९ बाट आफू बच्न र अरुलाई पनि बचाउन हातको स्वच्छतासम्बन्धी अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रणनीतिक मार्गचित्र बनाई तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक कार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ। शुभकामना सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले कोरोना भाइरसलाई निष्क्रिय…
मुटुरोग विशेषज्ञ डा. रेग्मीद्धारा लिखित पुस्तक ‘टन्सिलले बिगारेको मुटु’ लोकार्पण
काठमाडौं,१३ असोज । वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाश राज रेग्मीद्धारा लिखित पुस्तक ‘टन्सिलले बिगारेको मुटु’ लोकार्पण भएको छ । विश्व मुटु दिवसको अवसरमा शताब्दी पुरूष सत्यमोहन जोशीले उक्त पुस्तक लोकापर्ण गर्नुभयो । डा. रेग्मीले बाथ–मुटुरोग, गरिवी र अशिक्षाबाट प्रताडितहरूको मुद्दा रहेको भन्दै ऊक्त पुस्तकमा पनि मुटुरोगीहरुका विषय समेटिएको बताउनुभयो । बाथमुटुरोगको सबैभन्दा ठूलो शिकार विपन्नतामा हुर्किएका बालबालिका छन् । यस रोगका कारण नेपालमा वर्षेनी एक हजार बालबालिकाको मृत्यु हुने गरेको छ । डा. रेग्मीले वार्षिक आठसय जनाको मुटुको भल्भ फेर्ने जस्तो महंगो र जटिल शल्यक्रिया भइराखेको जानकारी दिदै हजारौंको संख्यामा युवायुवतीहरू बाथमुटुरोगबाट पीडित भई अशक्त जीवन बिताई रहेको बताउनुभयो । उहाँले सामान्य टन्सिल रोगका कारण उत्पन्न हुने बाथ–मुटुरोग बारे ९९ प्रतिशत जनतालाई जानकारी नरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले बाथमुटुरोगबारे जनचेतना जगाउन सके वर्षेनी हजारौं बालबालिकाको ज्यान बचाउन सकिने भन्दै हजारौंको संख्यामा युवायुवतीलाई अशक्त जीवनबाट सक्रिय जीवनमा फर्काउन सकिने बताउनुभयो । टन्सिलले बिगारेको मुटु’ पुस्तक मार्फत डा. प्रकाशराज रेग्मीले समाजका अपहेलित…
लकडाउनको समयमा पनि गंगालाल ह्दय रोग केन्द्रमा १८६ जनाको ओपन हार्ट सर्जरी
काठमाडौं,१३ असोज । लकडाउनको समयमा पनि बासबारी स्थित शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा १८६ जनाको ओपन हार्ट शल्यक्रिया भएको छ । विश्व मुटु दिवसको अवसरमा मंगलबार केन्द्रले आयोजना गरेको कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. चन्द्रमणि अधिकारीले गत १२ चैत देखि १० असोजसम्म १८६ जनाको शल्यक्रिया भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ६ हजार ४६१ जना बिरामीले केन्द्रबाट आकस्मिक सेवा लिएको जानकारी दिदै एक हजार ८५१ जना बिरामीले अन्तरंग बिरामी भर्ना सेवा लिएको बताउनुभयो । उहाँले क्याथ ल्याब प्रोसिड्युअर अन्तर्गत एक हजार २२९ जना बिरामीले सेवा लिएको बताउनुभयो । कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारीले ती मध्ये १७६ जना प्राथमिक एन्जियोप्लाष्टि, स्थायी पेसमेकरमा ९९ जना, कोरोनरी एन्जिओग्राफीमा ५८७ जना, कोरोनरी एन्जिओप्लास्टीमा २ ५३ जना बिरामीको उपचार भएको जानकारी दिनुभयो । यस्तै केन्द्रमा ८० जना कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार भएको छ । यो सँगै केन्द्रले मंगलबार बिहान नेपाल हार्ट नेटको सहयोगमा माइतीघरदेखि कोटेश्वरसम्म सचेतनामूलक कार ¥याली सम्पन्न गरेको जानकारी दिएको छ । यसैगरी कोभिड–१९…
देउराली जनताद्धारा कोरोना उपचारका लागि औषधि उत्पादन सुरु
काठमाडौं,७ असोज । देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) उपचारका लागि आवश्यक औषधि पहिलो पटक नेपालमा उत्पादन सुरु गरेको छ । फर्मास्युटिकल्सले फाभिर २०० एमजि ट्याबलेटको उत्पादन सुरु गरेको जानकारी दिएको छ । कोभिड १९ संक्रमण क्रमशः बढ्दै जाने देखिएकोले यस कठिन परिस्थितिमा सो रोगको उपचारका लागि आवश्यक औषधिहरुमध्ये फाभिपिराविर ओरल ट्याब्लेट्स एन्टिभाइरल औषधिलाई विश्वका धेरै मुलुकहरुले कोभिड १९ का बिरामीहरुमा परीक्षण पश्चात प्रयोग गरिरहेको छ । देउराली जनताले हालसम्म यो औषधि जापान, चीन, रसिया, अमेरिका, टर्कि, क्यानडा, भारत र बंगलादेश लगायत धेरै देशमा सरकारले कोभिड १९ को उपचारका लागी अत्याबश्यक प्रयोग गर्न अनुमती प्रदान गरिसकेको जानकारी दिएको छ । कोभिड–१९ ले सम्पूर्ण मानवको स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पारेको यस कठिन घडीमा बिगत तीन दशकदेखि नेपालमा औंषधि उत्पादन गर्दै आएको आफूले आफ्नो दायित्व बोधगरि कोभिड९१९ बाट संक्रमित ब्यक्तिलाई औषधि अभावको कारणले हतास हुन नपरोस भनेर यो औषधि उत्पादन सुरु गरेको उद्योगले जनाएको छ । सरकारबाट उत्पादनको अनुमति लिई…
अब रोबोटले मास्क र स्यानिटाइजर दिने
काठमाडौँ, १ असोज । राष्ट्रिय विज्ञान दिवसको सन्दर्भ पारेर नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले विश्वव्यापी महामारी रुपमा देखिएको कोरोनाको प्रभाव न्युनिकरणमा सहयोगी हुन सक्ने ‘नाष्ट भिजिटर सर्भिस रोबोट’ सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो प्रतिष्ठानमा कार्यरत इन्जिनियर रोशन पाण्डेको नेतृत्वमा चार अन्य इन्जिनियरको ‘इनोभेषन ग्रुप’ ले निर्माण गरिरहेको सो रोबोटले नेपाली र अँग्रेजी दुई भाषामा कुराकानी गर्दछ, मास्क लगाएको छैन, भने मास्क झिकेर दिने र स्यानिटाइजर समेत दिन सक्नेछ । हालसम्म बनेका रोबोटले विरामीलाई औषधि र खाना पु¥याउने गर्दछ भने नाष्टले बनाईरहेको रोबोटले हात जोडेर अभिवादन गर्ने, माक्स लगाएको, नलगाएको छुट्टाउने र मास्क नलगाएकोलाई माक्स दिने, सेनेटाईजर दिने, नास्टको बारेमा बोलेर तथा श्रब्यदृश्य मार्फत सुचनाहरु दिन सक्नेछ, इन्जिनियर पाण्डेले भन्नुभयो । साथै, आर्टिफियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङमार्फत दोहोरो कुराकानी समेत गर्न सक्ने हुनेछ । सो रोबोट महिला स्वय्मसेविकाको स्वरुपमा तयार भईरहेको छ । मानिसको शरीरको तापक्रम नाप्ने, सेनिटाईजर डिस्पेन्सरजडित, मानिसले मास्क लगाए, नलगाएको सङ्केत समेत गर्नुको साथै नास्टको विभिन्न…
सात हजार ७०१ संक्रमितको घरमै उपचार
काठमाडौं,३१ भदौ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार सात हजार ७०१ जना कोरोना संक्रमित होम आइसोलेसनमा रहेका छन् । लक्षण नदेखिएका तथा सामान्य लक्षण भएका संक्रमित घरमै आराम गरेर कोरोना विरुद्ध लडिरहेका छन् । बुधबार १६ हजार २ सय ४२ जना संक्रिय संक्रमित मध्ये ७ हजार ७०१ जना होम आइसोलेसनमा रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सबै भन्दा धेरै बाग्मती प्रदेशमा ३ हजार ९ सय जना होम आइसोलेसनमा छन्। त्यस्तै प्रदेश २ मा १ हजार ३ सय १, प्रदेश १ मा १ हजार १ सय ३९, प्रदेश ५मा ७ सय ४२ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३१४, गण्डकी प्रदेशमा १८२ र कर्णाली प्रदेशमा १२३ जना होम आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘खोप परीक्षणमा चनाखो बनौं’
काठमाडौँ,२८ भदौ । विशेषज्ञहरूले कोभिड–१९ खोपको अन्तिम अवस्थाको क्लिनिकल ट्रायलमा जानुअघि चनाखो हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । मुलुकलाई फाइदा हुने गरी खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले खोपको क्लिनिकल ट्रायलका सम्बन्धमा विशेषज्ञहरूसँग छलफल अगाडि बढाएको छ । वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद् प्राडा.शरद वन्तले कोभिड–१९ विरुद्ध खोपको तेस्रो चरणको परीक्षणमा सहभागी हुनु राम्रो भए पनि यसमा आफ्नै किसिमको कम्तीमा दुई सर्त राख्नैपर्ने बताए । ‘पहिलो, तेस्रो चरणको परीक्षणमा खोप सुरक्षित छ भन्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, नत्र खोप नै हाम्रा लागि रोगको कारण बन्न सक्छ । हालै बेलायतको खोप रोकिएको उदाहरण हामीसामु छ,’ उनले भने, ‘दोस्रो, यो खोप सफल भए हामीले पाउने सुविधाबारे पहिल्यै निर्क्योल हुनुपर्छ ।’ अनुसन्धानमा संलग्न देशले विशेष सहुलियतसहित खोप पाउनुपर्ने प्रावधानसमेत राख्नुपर्ने उनले बताए । ‘एउटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लागि हामी ज्यालादारीको मजदुर मात्र हुने ’ उनले भने, ‘यो दुईवटा कुरा परिपूर्ति भयो भने विज्ञानको विकासका लागि हामीले गर्ने योगदानका लागि तयार हुनुपर्छ । हामी भरिया मात्र हुने वा साझेदार हुने  खोपमा सहभागी हुनेहरूका लागि…
मेसिनले दुई टुक्रा भएको रविको हात कसरी जोडियो ?
काठमाडौं,२४ भदौ । जुन बेला रवि सिंहको हात छर्लक्कै छिनेर दुई टुक्रा भएको थियो । त्यो बेला उहाँलाई लागेको थिएन कि मेरो हात फेरी पनि जोडिन्छ भनेर । काम गर्ने क्रममा दक्षिणकालीस्थित एक कारखानामा फ्लेक्सको काम गर्दा फ्लेक्स पाइप मेसिनले रविको हत्केला दुई टुक्रा पारिदिएको थियो । सर्लाही जिल्लाको पर्सा गाँउपालिका २ निवासी १८ बर्षीय रवि सिंहको मेसिनले दुई टुक्रा बनाइदिएको हत्केला राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सकहरुले सफलतापूर्वक जोडिदिएका छन् । अहिले उनलाई अर्को जुनि पाएजस्तो भएको छ । हात छिनेपछि मर्छुकी जस्तो लागेको थियो,तर डाक्टरसाबहरुले जस्ताको तस्तै बनाई दिनुभएको छ । उहाँहरुलाई म भगवानजस्तै मान्दछु । त्यो बेला सर्लाहीका रवि सिंह दक्षिणकालीमा एक कम्पनीमा काम गर्थे । हात मेसिनले दुई टुक्रा पारिदिएपछि त्यहि दुई टुक्रा हात लिएर उनी महाबौद्धस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर आएका थिए । आउनासाथ चिकित्सकहरुको टोलीले शल्यक्रिया ग¥यो र अहिले रविको हात जस्ताको तस्तै भएको छ । टुक्रा भएको हत्केला बोकेर ट्रमा पुगेका रविको टुक्रेको हात प्लास्टिक सर्जरी…
एकै दिन १५६६ ले जिते कोरोना भाइरस
काठमाडौं,२० भदौ । शनिबार एक हजार ५ सय ६६ जनाले कोरोना जितेर डिस्चार्ज भएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रबक्ता डा जागेश्वर गौतमले देशका विभिन्न आइसोलेसन बाट १५६६ जनाले कोरोना भाइरस जितेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले संक्रमितमध्ये हालसम्म ६० प्रतिशत अर्थात २७ हजार १२७ ले कोरोना जितेको बताउनुभयो । प्रवक्ता प्रा.डा. जागेश्वर गौतमले आज कोरोनाबाट ९ जनाको ज्यान गएको जानकारी दिदै मुलुकमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेहरुको संख्या २ सय ८० पुगेको बताउनुभयो ।
कोरोना उपचारमा कति सफल प्लाज्मा थेरापी !
वासिङ्टन, २ भदौ। मायो क्लिनिकका अनुसन्धाताले कोरोना (कोभिड–१९)बाट निको भएका व्यक्तिको रक्त प्लाज्मा अरू व्यक्तिलाई निकै फलदायी रहेको जानकारी दिएका छन् तर प्रामाणिक तहमा पुष्टि भइसकेको छैन । प्रभावकारी उपचार पद्धतिको व्यापक खोजी भइरहँदा कतिपय विज्ञले भने प्लाज्मा थेरापीमा रहेका अस्पष्टताप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकामा ६४ हजारभन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितलाई प्लाज्मा थेरापीबाट उपचार गरिएको छ । खोप (भ्याक्सिन) विकास गर्नुअघि सयौँ वर्षदेखि यो विधि विभिन्न ज्वरो (फ्लु) र दादुराका बिरामीको उपचारका लागि प्रयोग हुन्थ्यो । नयाँनयाँ रोग निस्कँदा औषधि र खोप दुवै नहुँदा मानिसको जीवन जोखिममा पर्नु स्वाभाविक हो । यस्तो आपत्कालीन स्थितिमा वैज्ञानिकले प्लाज्मा थेरापीलाई तत्कालै उपलब्ध विधिका रूपमा प्रचलनमा ल्याउने गरेका छन् तर यो विधि सबै किसिमका सङ्क्रमणमा सफल भएको छैन । हालसम्म कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न प्लाज्मा थेरापी सक्षम र उपयुक्त नै छ भन्ने ठोस वैज्ञानिक आधार तयार भइसकेको छैन र यस्तो अवस्थामा यसको उपयोग गर्नु कति ठीक होला ? तर प्लाज्मा दिइएका करिब ३५…
खीरमा औषधिजन्य गुण
काठमाडौँ, साउन १५ गते । साउन १५ मा शरीर स्वस्थ भएका बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्मको अति प्रिय भोजन खीर खाएर साउन १५ मनाइँदै छ । असार १५ मा दही चिउराको स्वाद लिएको ठीक एक महिनापछि साउन १५ मा खीर खाने चलनको विशेष सांस्कृतिक महत्त्व छ । बाग्मती अञ्चल आयुर्वेद औषधालयमा कार्यरत चिकित्सक डा. अञ्जु कार्की भन्नुहुुन्छ, “खीर धेरैको प्रिय भोजन हो । यसको सांस्कृतिक र औषधिजन्य महìव छ ।” खीरले मानिसमा रोगसँग लड्ने क्षमता बढाउने हुँदा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को विरुद्ध शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्न खीर उपयोगी हुन्छ । गोठ धुुप, देव र पितृ कार्यमा पनि खीर पाक्ने हुुँदा सांस्कृतिक रूपमा पनि खीरलाई पवित्र भोजन मानिन्छ । डा. कार्कीका अनुसार आयुर्वेद शास्त्रमा खीरमा हालिने वस्तुहरू विशिष्ट औषधीय गुुणका छन् । खीरमा ल्वाङ, घ्यू, काजु, नरिवलका टुक्रा, दालचिनी, मरिच, केसर, दाख राख्ने गरिन्छ । ती सबै वस्तुमा औषधीय गुुण छ र स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । “खीर सहजै पचाउन गाह्रो पर्ने खाद्य परिकार हो,…
नोबेलले सुरु गर्यो टाउको तथा गर्दन सम्बन्धि क्यान्सरको शल्यक्रिया,एक नम्बर प्रदेशका जनता लाभान्वित
विराटनगर,१४ साउन । विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा टाउको तथा गर्दन सम्बन्धि क्यान्सरको शल्यक्रिया सुरु भएको छ । अस्पतालले बिशेषज्ञ शल्य चिकित्सकको टाेलिले नोबेलमा ‘टाउको तथा गर्दन ’ सम्बन्धि क्यान्सरको शल्यक्रिया थालेको जानकारी दिएको छ। भारतको एम्स अस्पतालबाट आएको समूहले टाउको तथा गर्दन क्यान्सरको शल्यक्रिया गरेको हो। गर्दन क्यान्सरमा एमसीएच गरेका बरिष्ठ सर्जन डा.ऋषिकेष ठाकुरलाई नोबेलले ल्याएको हो। डा.ठाकुर टाउको तथा गर्दन सम्बन्धि क्यान्सरमा एमसीएच गर्ने नेपालकै पहिलो शल्य चिकित्सक हुनुहुन्छ । गुणस्तरीय उपचार सेवाका लागि बिशेषज्ञ चिकित्सक ल्याएर शल्यक्रिया थालिएको नोबेल शिक्षण अस्पतालले जनाएको छ । मुख, थाईराईड, स्वासनली, नाकको साईनस, टाउको, र्याल ग्रन्थी, कान लगायत टाउको तथा गर्दन सम्बन्धि सबै क्यान्सरको शल्यक्रिया थालिएको डा.ठाकुरले जानकारी दिनुभयो । ‘नोबेलमा टाउको तथा गर्दन सम्बन्धि सबै किसिमका क्यान्सरको शल्यक्रिया थालेका छौ ।’ डा.ठाकुरले भन्नुभयो–‘म टाउको तथा गर्दन सम्बन्धि क्यान्सरमा एमसीएच गर्ने नेपालको पहिलो सर्जन पनि भएकाले मुलुककै उत्कृष्ट सेवा दिने हिसावले लागेका छौं ।’ नोबेलले सेवामा स्तरीयता बढाउँनका लागि बिशेषज्ञ…
बजारमा आयो ‘क्लोरिन म्याट’ जसको प्रयोगले भाइरसलाई रोक्दछ
काठमाडौ,३ साउन । क्लोरिन म्याटको प्रयोगले विभिन्न भाइरसलाई समेत रोक्न सकिन्छ । पछिल्लो समय क्लोरिन म्याटको महत्त्व पनि बढ्न थालेको छ। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सँगै क्लोरिन म्याटले चर्चा पाउन थालेको हो । क्लोरिन म्याट डोर म्याट जस्तै कार्यालय वा घरको ढोकामै राखिने म्याट हो । वातावरण र जनस्वास्थ्य संस्था (एन्फो) का निमित्त कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र श्रेष्ठले क्लोरिन म्याटले बाहिरबाट आएका व्यक्तिको खुट्टामा कतै कोरोना भाइरस टाँसिएर आएको रहेछ भने निसंक्रमण गर्न सहयोग पुर्‍याउने बताउनुभयो । निमित्त कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार क्लोरिन म्याट डोर म्याट जस्तै हुने तर यसको मुनिबाट प्यानल राखिएको हुन्छ । आयातकार र प्लाष्टिकले बनेको यो म्याटमा हाई डेन्सिटीको फार्म हुन्छ । त्यसमा प्वालै प्वाल भएको रबरको डोर म्याट हुन्छ र क्लोरिनले भिजेको हुन्छ । जब मानिसले क्लोरिन म्याट माथि टेक्छन् र मानिसको भारले क्लोरिन जत्ति माथि आउँछ । क्लोरिनले गर्दा जुत्ता वा चप्पलको तलुवामा भिज्दछ । कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले मानिसको जुत्तामा भाइरस टाँसिएर आएको रहेछ भने…
बेहोस नगराई गरियो मस्तिष्क शल्यक्रिया, फेसुबकमा प्रत्यक्ष प्रसारण
एजेन्सी- मस्तिष्कको सर्जरी संवेदनशील विषय हो। त्यसमाथि पनि यस्तो शल्यक्रिया सचेत अवस्थामामै गरिए कस्तो अनुभव छ होला? यतिमात्र होइन, सचेत अवस्थामा गरिएको मस्तिष्कोको शल्यक्रियाको फेसबुकमा प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहे कस्तो अनुभव होला? जो कोहीलाई यस्तो कल्पना गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। ठीक यस्तै अनुभव गरेकी छन् २५ वर्षीया जेन्ना सार्टले। उनको मस्तिष्क शल्यक्रियाको प्रत्यक्ष प्रसारण फेसबुकमा गरिएको छ। डल्लासको मेथोडिस्ट मेडिकल सेन्टरमा गरिएको शल्यक्रियामा उनको मस्तिष्कमा रक्तनली गुजल्टिएको थियो। यसले गर्दा उनको बोल्ने शक्तिमा असर पार्नुका साथै छारे रोगसमेत भएको थियो। अमेरिकाको जर्जियास्थित ब्रेन्यु युनिभर्सिटिबाट अकुपेसनल थेरापीमा स्नातकोत्तर गरेकी उनले पुर्नस्थापना अस्पतालमा स्ट्रोकका बिरामीलाई मद्दत गर्थिन्। त्यतिबेलादेखि नै उनलाई पनि स्ट्रोकका लक्षण देखा पर्न थालेका थिए। उनको शल्यक्रिया सुरु गर्नुअघि सार्टलाई डाक्टरहरुले एनेस्थेसियामा राखेका थिए। जब डाक्टरहरु मस्तिष्कमा पुगे, सार्टलाई सचेत अवस्थामा ल्याइयो। उनी बोल्न सक्थिन्, सोधेको प्रश्नको जवाफ दिन्थिन्, आफ्नो मस्तिष्कमा के भइरहेको अनुभव गर्न सक्थिन्। शल्यक्रियाको दौरान सार्टलाई आइप्याड देखाइएको थियो। आइप्याडमा उनले विभिन्न नम्बर, रङ, जनावर र अरु विभिन्न चित्रहरु…
विराटनगरको नोवेल अस्पतालमा कृतिम आँखा प्रत्यारोपण
बिराटनगर,२६ कात्तिक । बिराटनगरको घिनाघाटकी बबिता सरदार १६ बर्ष अघिदेखि एक आँखाको भरमा छिन् । पाँच बर्षकै उमेरमा देब्रे आँखा गुमाएकी उनले दाहिने आँखाले हेर्ने गर्छिन् । २१ बर्षीया सरदारलाई दुई आँखाले हेर्न नपाउँदाको समस्या जति छ, त्यत्तिनै एउटा आँखा नभएर अनुहारको स्वरुप बिग्रदाको पीडा थियो । तर, अहिले उनको यो पीडा हटेको छ । बिराटनगर स्थित नोबेल शिक्षण अस्पतालमा कृत्रिम आँखा लगाएपछि उनको अनुहारमा अहिले कुनै खोट देखिदैन । दाहिने आँखामा मात्र दृष्टि भएपनि हेर्दा दुवै आँखा दुरुस्तै छन् । झट्ट हेर्दा वास्तविक र कृत्रिम आँखा छुट्याउँन सकिदैन । दुवै आँखाको चाल उस्तै छ । दृष्टि नफर्किएपनि आँखा नहुँदा गुमेको अनुहारको स्वरुप फिर्ता पाउँदा उनी दंग छिन् । ‘आँखा त गुम्यो–गुम्यो, तर एउटा आँखा नभएर अरुले जिस्काउँदा साह्रै नराम्रो लाग्थ्यो ।’ सरदारले भनिन् ‘नक्कली आँखा लगाएपछि अव अरुले हेर्दा आँखा नभएको जस्तो देखिदैन, पहिले देख्नेहरु अहिले छक्क पर्छन । खुशी लागेको छ ।’ बबिता पाँच बर्षकी हुँदा आँखामा…
के हो निमोनिया ? बालबालिकालाई कसरी जोगाउने ! निमोनियाको लक्षण र बच्ने उपाय सहित
निमोनिया रोग भनेको के हो? हाम्रो अाखाले नदेखिने किटाणुबाट अचानक स्वासप्रश्वस प्रक्रियासंग सम्बन्धित अंगहरुमा संक्रमण भइ सास फेर्ने बाधा पुगेमा यसलाई स्वासप्रश्वस रोग भनिन्छ। यसले धेरैजसो फ़ोक्सोमा असर गर्दछ साथै नाक र कानमा समेत असर गर्दछ। निमोनिया रोगको समस्या निमोनिया रोगमा प्रायजसो बच्चाहरुलाई साधारण रुघाखोकी लाग्ने गर्दछ। तर, कहिलेकाही रुघाखोकीबाट नै ५ बर्षमुनिका बच्चाहरुमा निमोनिया भन्ने घातक रोग पनि लग्न सक्दछ । फ़ोकसोमा कितानुहरुबाट संक्रमण भएमा निमोनिया हुन्छ। यस रोगबाट नेपालमा बर्षनी करिब ४० हजारजति ५ वर्षमुनिका बालबालिकाहरु मर्ने गर्दछ। खास गरेर श्वासप्रश्वास रोगमा हुने मृत्युको कारण निमोनिया रोगको समयमै उपचार नपाउनाले नै हो। श्वासप्रश्वास रोगका लक्षण तथा चिन्हहरु के के हुन्? साधारण रुगाखोकी लाग्दा बच्चाहरुलाई खोकी लाग्ने,नाकबाट सिगान बग्ने र हल्का ज्वरो आउने गर्दछ। निमोनिया भएको बच्चामा भने छिटोछिटो बच्चाको सास चल्ने, सास फेर्ने गाह्रो हुने, उच्च ज्वरो आउने र कोखा हान्नेजस्ता लक्षण र चिन्हहरु देखा पर्दछन्। तर, कडा निमोनिया हुन गएमा बच्चा खान पिउन नसक्ने हुन्छ र कसैकसैमा…
औषधिको रुपमा प्रयोग हुने तुलसीको गुण
काठमाडौं ,२१ कार्तिक । कार्तिक शुक्ल एकादशीका दिन आज औषधिको गुणले युक्त तुलसीको पूजाराधना गरी हरिबोधिनी एकादशी पर्व मनाइँदैछ । तुलसी प्राय सबैको घरघरमा रोपिएको देख्न सकिन्छ । हिन्दु धर्ममा तुलसीको प्रयोगलाई पवित्र मानिन्छ । पूजा आजा होस्, वा व्रत हरेक पर्वमा हामी यसको प्रयोगलाई निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि निकै लाभदायक मानिन्छ । तुलसीको सफा पातलाई पिँधेर प्राप्त हुने रस ५–१० मिलि मा मह मिसाएर दिनको २ देखि ३ पटक सेवन गर्दा सर्दी, खोकी, रुघा, निमोनिया, दम आदिमा प्रभावकारी हुन्छ । बच्चाहरूको साधारण पेटदुखाइमा, अजीर्ण, अरुचि रोगमा तुलसीको पातको रस र अदुवाको रस मिसाएर दिँदा फाइदा हुन्छ । मधुमेह तथा पिसाबसम्बन्धी रोगमा तुलसीको बीजलाई पिँधेर तयार गरिएको लेदोलाई १–३ ग्रामसम्म दिनमा दुईपटक सेवन गर्दा पनि फाइदा गर्छ । विषम ज्वर वा अन्य रुघाखोकीमा तुलसीको पात चपाएर सेवन गर्दा फाइदा हुन्छ । केही रोग नभएको अवस्थामा पनि तुलसीको ३–४ वटा पात चपाएर दिनमा २–३ पटकसम्म त्यसै वा…
रातो मासु हप्तामा चार पटक उपभोग गर्दा राम्रो: अध्ययन्
बीबीसी । विश्वका अधिकांश महत्त्वपूर्ण सङ्गठनहरूसँग असहमति व्यक्त गर्ने उक्त अध्ययनले भनेको छ – तिनीहरूले यसअघि दिएका प्रमाण दुर्बल छन् र रातो मासुले मानिसको स्वास्थ्यमा पार्ने असर कम छन्। केही विज्ञहरूले सूक्ष्म ढङ्गले गरिएको जाँचको प्रशंसा गरेका छन्। विज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय टोलीले मानिसहरूले रातो मासु, ससेज तथा बेकनका कारण क्यान्सरको जोखिम बढ्ने निकै कम प्रमाण भएकाले त्यो खाइरहन मिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो। एनल्स अफ इन्टर्नल मेडिसन नामक जर्नलमा लेख्दै अनुसन्धानकर्ताहरूले रातो एवम् प्रशोधित मासुको उपभोगको खतराबारे हाल उपलब्ध प्रमाण निकै कमजोर रहेको भन्दै मानिसहरूले हप्ताको तीन वा चार पटक तिनको उपभोग गरिरहन मिल्ने जनाएका छन्। तर त्यो निष्कर्ष विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हाल जारी गरेको सुझावविपरीत छ। साथै जनस्वास्थ्यसम्बन्धी निकायहरूले यस्तो निचोडले मानिसहरूको विवेकपूर्ण खानेबानीमा असर पुग्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। रातो वा प्रशोधित मासु केलाई मानिन्छ ? चौपायाको आदिको मासु रातो मासुमा गणना हुन्छ भने हाँस र सिकार गरिएका चराचुरुङ्गीको मासु त्यसमा गणना हुँदैन। टिक्ने समय र स्वाद परिवर्तन गरिएको…
बालबालिकालाई रोटाभाइरस विरुद्धको खोप दिइने
काठमाडौँ, ५ कात्तिक । सरकारले आगामी जेठ महिनादेखी बालबालिकामा रोटा भाइरस विरुद्धको खोप शुरु गर्ने भएको छ । रोटाभाईरसको कारणबाट बालबालिकामा देखिने झाडापखलाको समस्या न्युनिकरण गर्न नयाँ खोप शुरु गर्न लागेको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखा अन्तर्गतको खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक शर्मा गौतमले रोटारिक्स नामक खोप १५ महिना भित्रका बालबालिकालाई ६ हप्ता र १० हप्तामा गरी दुईपटक दिइने बताउनुभयो । शर्माले बालबालिकामा देखिने झाडापखलाको मुख्य कारण रोटाभाइरस भएको पाइएकोले खोप शुरु गर्न लागेको बताउनुभयो । यसले बालबालिकाको ज्यानै समेत लैजाने गरेको छ । यसलाई रोक्न सरकारले नियमित खोप कार्यक्रममा रोटाभाइरस विरुद्धको खोप पहिलो पटक शुरु गर्न लागेको हो । यसपटक १५महिना मुनिका ६ लाख ३० हजार बढी बालबालिकालाई यो खोप दिइदै छ ।’ गाभीको सहयोगमा दिइन लागिएको यो खोप भाइलमा आउँछ । खोप भनिएपनि बालबालिकालाई सिरिन्जबाट दिइने भने होइन । पोलियो थोपा जस्तै मुखबाट थोपा खुवाउने हो । यो खोप एक जना बच्चाका…